बौद्धमा प्रेमी–प्रेमिकाको मृत्युमा पब्जी कारक ! « Bagmati Page
बौद्धमा प्रेमी–प्रेमिकाको मृत्युमा पब्जी कारक !
प्रहरीले दुवैजनाको मोबाइललाई पनि फरेन्सिक जाँचका लागि पठाउने तयारी गरेको छ । दुवैको अभिभावक काठमाडौं आएपछि पोष्टमार्टम हुनेछ । -अनलाइनखबर
प्रहरी तल्लो दर्जाका २० हजार सुरक्षाकर्मीको बढुवा प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नियमावली संसोधन गरेसँगै नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर भन्दा तल्लो दर्जामा कार्यरत २०
प्रहरीमा १२ वर्षसम्म प्रमोशन नहुने व्यवस्था हटेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नियमावली–२०७१ लाई संशोधन गरेर
७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा युवक पक्राउ
काठमाडौं । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाबाट ७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका २६ जना एसएसपीहरुको सरुवा भएको छ । गृह मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट
नयाँ बसपार्कमा सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा ८ जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बसपार्कमा एक महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा ८ जना पक्राउ परेका
भक्तपुरमा श्रीमतीको हत्या गरी फरार पक्राउ
काठमाडौं । आफ्नै कोठामा श्रीमतीलाई राति कुटपिट गरी हत्या गरेर फरार भएका एक पुरुषलाई महानगरीय
ज्यूँदो सालक १ करोड १० लाख बेच्न खेज्ने थामी पक्राउ
काठमाडौँ । ज्यूँदो सालकसहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा दोलखा कालिञ्चोक गाउँपालिका–६